चेन्नई बिरुद्द सन्दीप नखेल्ने – onlinekhelkhabar.com
चेन्नई बिरुद्द सन्दीप नखेल्ने
अनलाइन खेल खबर संवाददाता	Posted on बैशाख २७ २०७६, शुक्रबार
बैशाख २७ , अनलाईन खेलखबर ।। नेपालका युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने आज चेन्नई बिरुद्दको खेलमा पनि अन्तिम ११ मा पर्न असफल भएका छन । ईण्डियन प्रिमियर लिग ( आईपिएल ) अन्तर्गत दोस्रो क्वालिफायर खेलमा चेन्नईले अहिले टस जितेर पहिले बलिङ्ग गर्ने निर्णय गरेको छ ।
दिल्लीले सन्दिपलाई पछिल्ला खेलहरुमा बेन्चमै राखेको छ । जसको निरन्तरता आज पनि दिएको छ । जारि प्रतियोगितामा ६ खेल खेलेका सन्दिपले ८ विकेट लिईसकेका छन ।
यता चेन्नईको बैकल्पिक मैदान डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियममा जारि खेलमा जित हासिल गर्ने टिमले आउदो आईतबार हुने प्रतियोगिताको फाईनलमा मुम्बई ईण्डियन बिरुद्द प्रतिष्पर्दा गर्नेछ ।
७ बर्षपछी प्रतियोगिताको प्ले अफ खेल्दै गरेको दिल्लीलाई यसपटक भने फ़ाईनल पुग्ने सुनौलो अबसर पनि रहेको छ । सन् २००८ , २००९ मा सेमिफाईनल पुगेको दिल्ली २०१२ मा प्ले अफ स्थानमा पुगेको थियो । तर यसपछि दिल्ली सदैभ कमजोर टिममा साबित हुन् पुग्यो ।
तर अहिले १२ औ सस्करणमा दिल्लीले नाम मात्र परिबर्तन गरेन सोच पनि सकारात्मक राख्दै उत्कृष्ट प्रदशन गर्दै अहिले यो स्थानमा आफुलाई उभाएको छ ।
दरिलो ईतिहास रहेको चेन्नईलाई ईतिहास बनाउन लालाहित दिल्लीले अहिले जारि दोस्रो क्वालिफायरमा कडा टक्कर पक्कै दिनेछ । लिग चरणमा दिल्लीले राम्रो प्रदशन गर्दै कुल १४ खेलबाट ९ खेलमा जित र ५ खेलमा हार व्यहोर्दै अंकतालिकामा १८ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहदै ७ बर्षपछी दिल्लीले प्ले अफमा स्थान बनाएको थियो । पहिलो मुम्बई र दोस्रो चेन्नई सँग समान १८ रन भएपनि दिल्ली नेट रनरेटमा पछि पर्दै तेस्रो स्थानमा रहदै एलिमिनेटरको यात्रा तय गरेको थियो ।
यसअर्थमा दिल्लीले सो हारको बदला सँगै पहिलो पटक फाईनल खेल्ने रणनीतिका साथ् अहिले मैदान उत्रिएको छ । भने चेन्नई पनि जारि प्रतियोगितामा दिल्लीलाई तेस्रो पटक निराश गराउने सोचका साथ मैदानमा उत्रिएको छ ।
Previous Postदिल्ली र चेन्नईको खेल आज : दिल्ली ईतिहास रच्ने दाउमा
Next Postदिल्लीद्रारा चेन्नई सामु सम्मानजनक लक्ष्य प्रस्तुत